यस्ताे एउटा देश जहाँ, सर्पकाे कुनै जात पनि पाइदैन, कारण सुन्दा झनै अनाैठाे ! – Paluwa Khabar
यस्ताे एउटा देश जहाँ, सर्पकाे कुनै जात पनि पाइदैन, कारण सुन्दा झनै अनाैठाे !
मंग्सिर ८, २०७७ सोमबार 72
यस्ताे एउटा देश जहाँ, सर्पकाे कुनै जात पनि पाइदैन, कारण सुन्दा झनाै अनाैठाे ! नेपाल सहित विश्वका लगभग सबै देशहरुमा सर्प पाइन्छ । सर्पसँग मानिसहरु एकदम डराउने गर्छन तर विश्वमा यस्ता केहि ठा`उँहरु पनि रहेका छन्, जहाँ सर्प नै पाउँदैन् । आज हामी त्यस्ता केही दे`शहरुका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।।
ब्राजिललाई ‘सर्पको देश’ पनि भनिन्छ, कि`नकि यहाँ धेरै सर्पहरू पाइन्छन् । ब्राजिलमा जति सर्प पाउँछन् तपाईलाई अरू कुनै ठाउँमा भेट्टाउन सहज छैन । तर के तपाईलाई थाहा छ संसारमा यस्तो देश छ जो एक ‘सर्प रहित’ छ । अर्थात त्यस्तो देश जहाँ कुनै सर्प नै छैन । हो, आयरल्यान्ड एक त्यस्तो देश हो जहाँ सर्पहरू छैनन् ।।
तर यदि तपा`ईंलाई यसको प`छाडि कारण थाहा छ भने, तब तपाईं थप चकित हुनुहुनेछ । आयरल्याण्डमा सर्प नभएको कारण जान्नु अघि हामी यहाँ केहि चाखलाग्दो चीज पनि जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । तपाईलाई यो जानेर अच्चम लाग्नेछ कि ईसापूर्व १२८०० मा आयरल्याण्डमा मानिसजातिको अस्तित्वको प्रमाण छ । सब भन्दा पहिले त्यहाँ मानिस भएको बताइन्छ ।।
यस बाहेक, आ`यरल्याण्डको अर्को विशेष कुरा यो हो कि त्यहाँ एउटा बार छ जुन वर्ष ९०० मा खोलिएको थियो र यो आज पनि चलिरहेको छ । यसको नाम ‘सीन्स बार’ हो । तपाईंले ‘टाइटैनिक’ जहाजको बारेमा थाहा पाइसकेको हुनुपर्दछ । यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो जहाज थियो, जुन अप्रिल १९१२ मा समुद्रमा डुबेको थियो ।।
जहाज उत्तरी आ`यरल्याण्डको बेलफास्ट शहरमा नि´र्माण गरिएको थियो । यो आयरल्यान्डको बारेमा भनिएको छ कि यदि आज पृथ्वीमा सबै ध्रुवीय भालुहरू जीवित छन्, यदि उनीहरूले आफ्ना पुर्खाहरूलाई पत्ता लगाउन खोजे, भने तिनीहरू सबै ५० हजार वर्ष अघि आयरल्याण्डमा बस्ने खै`रो महिला भालुका सन्तानहरू हुन् ।।
अब प्रश्नमा आ`उनुहोस् कि आयरल्यान्डमा सर्पहरू किन फेला पर्दैनन् ? वास्तवमा, यसको पछाडिको कथा छ । आयरल्याण्डमा इसाई धर्मको संरक्षणका लागि यो भनिन्छ कि सेन्ट प्याट्रिक नामका एक जना सन्तले सम्पूर्ण देशको सर्पलाई घेरेर ती टापुबाट बाहिर समुद्रमा फालिदिए । उसले ४० दिन भोकाएर यो काम पूरा गरिसकेको थियो ।।
यद्यपि वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि आ`यरल्यान्डमा कहिल्यै सर्पहरू थिएनन् । फोसिल रेकर्ड विभागमा त्यस्तो कुनै रेकर्ड छैन कि आयरल्याण्डमा सर्पहरू छैनन् । आयरल्याण्डमा सर्पहरूको अनुपस्थितिको बारेमा पनि एउटा कथा छ जुन सर्पहरू त्यहाँ फेला परेका थिए, तर चरम चि`सोका कारण तिनीहरू लोप भए ।।
यी सबै दे`शहरूमा सर्पहरू फेला पर्दैनन् । किनभने यी देशहरूमा यो धेरै चिसो छ र प्रायः त्यहाँ चिसो मौसम रहेको हुन्छ । आइसल्याण्ड, स्विडेन, स्विट्जरल्याण्ड र नर्वेमा सर्प फेला पर्दैन किनकि यी देशहरूमा धेरै चि`सो हुन्छ । प्राय; त्यहाँ चिसो मौसम रहेको हुन्छ, त्यसैले सर्पहरू त्यहाँ फेला पार्न सम्भव हुँदैन । सर्प जमिन र पानीमा बस्छन् । ची`सो जमिन र पानीमा सर्पको कल्पना नै गर्न सकिन्न ।।
काेराे-ना भा- ईरस (काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।। हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।।
Prevचिनियाँ राजदुत र प्रचण्ड बिच भेटबार्ता
Nextओढारमा भैंसी पालेर दुई छोरालाई मास्टर डिग्री पढाउने महान आमा बुबा यिनै हुन् ,पुरा पढ्नुहोस्
Breaking news;> कक्षा १२ को नतिजा सार्बजनिक ! कसरि हेर्ने रिजल्ट? हेर्नुहोस् पूरा विवरण…
अन्तर्वार्ताकै क्रममा किन भ’ क्कानिएर रोए ज्ञानेन्द्र शाही? यस्तो छ मुख्य कारण (भिडियो हेर्नुहोस्)